အမေ့အိမ်: ပြည်တွင်းသို့ မြန်မာလုပ်သားများ လွှဲငွေ တစ်လပျမ်းမျှ ကန်ဒေါ်လာ သိန်း ၁၄၀၀ ခန့်ရှိ
ပြည်တွင်းသို့ မြန်မာလုပ်သားများ လွှဲငွေ တစ်လပျမ်းမျှ ကန်ဒေါ်လာ သိန်း ၁၄၀၀ ခန့်ရှိ
From : ခေတ်လူငယ်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများမှ
ပြည်တွင်းသို့ လွှဲငွေမှာ တစ်လလျှင် ပျမ်းမျှ ကန်ဒေါ်လာ သိန်း ၁၄၀၀ ခန့်ရှိကြောင်း CB ဘဏ်မှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးဖေမြင့်က ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသော ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား အရေအတွက်မှာ ၇ သိန်းခန့်ရှိပြီး တစ်လလျှင် လုပ်သားတစ်ဦးမှ ကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ခန့် အနည်းဆုံး ပြည်တွင်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ကြောင်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။ အဆိုပါ ငွေကြေးများမှာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ မဖွံ့ဖြိုးသေးခြင်းကြောင့် ကန်ဒေါ်လာအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မလာဘဲ ကျပ်ငွေအဖြစ်သာ ဟွန်ဒီလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းပေးပို့နေရကြောင်း ၄င်းထံမှ သိရသည်။ လက်ရှိတွင် ပုဂ္ဂလိကဘဏ် ၄ ဘဏ်ဖြစ်သော ကမ္ဘောဇဘဏ်၊ CB ဘဏ်၊ AGD ဘဏ်နှင့် ဧရာဝတီဘဏ်တို့အား စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်းတို့နှင့် ငွေပို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားပြီး
မလေးရှားနိုင်ငံမှ စတင်ငွေပို့ငွေလွှဲ ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်သည်။ CB ဘဏ်အနေဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် ငွေပို့ငွေလွှဲ လုပ်ငန်းကို ဇွန် ၁ ရက်နေ့မှ စတင်လွှဲပြောင်း ပေးနပြီဖြစ်ပြီး ဇွန် ၁ ရက်မှ ဇွန် ၃၀ ရက်အထိ တစ်လအတွင်း ပြည်တွင်းသို့ ငွေလွှဲပို့ခြင်းမှာ ကျပ်သိန်း တစ်ထောင်ကျော် ရှိကြောင်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ သိရသည်။ အထက်ပါ နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံနှင့် ငွေပို့ငွေလွှဲ ပြုလုပ်ခွင့်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် လုပ်ကိုင်နေပြီး ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်မူ AGD ဘဏ်မှ ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့မှ စတင်လုပ်ကိုင်ကာ စင်ကာပူနိုင်ငံနှင့်မူ လုပ်ကိုင်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလျက်ပင်ရှိကြောင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရ ဘဏ်များမှ သိရသည်ဟု ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ထုတ် Popular News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ရေးသားသူ © အမေ့အိမ်အဖွဲ့
အေးချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော စည်းကမ်းပြည့်ဝသည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ် အမြန်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ ဒို့နိုင်ငံသားအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ် တာဝန်ကျေစွာ၊ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ အတူကြိုးစားကြပါစို့.... အခြားသတင်းများ
KIO လ၀က ကျောင်း လိုင်ဇာမြို့ တွင် ပြန်ဖွင့်
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ၏ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းဌာနများ အတွင်း ခန့်အပ်သွားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တစ်လကျော် လူဝင်မှုကြီး ကြပ်ရေးေ ကျာင်း (Masha Pru-...
တရုတ် လေကြောင်းလိုင်း များတွင် ဗုံးလန့်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့
တရုတ်နိုင်ငံတွင်းရှိ လေကြောင်းလိုင်း ၃လိုင်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဗုံးလန့်မှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွား ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဗုံးလန့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လေကြောင်...
ကန်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ အရေး ဘာတွေ အလေးပေးမလဲ
[image: Photo: ကန်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအရေး ဘာတွေ အလေးပေးမလဲ Sunday, May 19, 2013 သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ၁၉၆၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးြ...
အစိုးရသစ်လက်ထက် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်များ ကြောင့် ယခုပညာသင်နှစ် ကျောင်း အပ် ချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာကျောင်းအုပ်က ကျောင်းသားမိ...
ကယားပြည် ဒုတိယအကြိမ် အပစ်ခတ်ရပ်ဆွေးနွေးပွဲ မေလအတွင်း မသေချာ
Super User ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ယခုမေလအတွင်း ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ အစီအစဉ်တွေချထားကြပေမဲ့ အစိုးရဘက်က အဆင်သင့်မရှိတဲ့အတ...
ကာတွန်း – Ath မေ ၁၉ ၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်း Ath ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။
၈၈ တွေ အမည် ပြောင်းပြီ
၁၉၈၈ ခုနှစ်က ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ ရှေ့တန်းက ပါဝင်ဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝင် ဦးဆောင်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်အမည်ကို...
မြန်မာပြည်သားစာစောင် (မေလ - ၂၀၁၃ ခုနှစ်)
The Burmese Journal (May- 2013)
*In the dark**
I was thrown intoacar like bus**
Becameahuman like others at first**
I don't know where is this vehicle from**
Or how far the journey it h...
Memory of 1988 Movement
၁၉၈၈ ဇွန်လ ကျောင်းသားအရေးအခင်း ၂၅နှစ်ပြည့်အမှတ်တရစာစု
၁၉၈၈ မတ်လ ဖုန်းမော်အရေးအခင်း၊ အင်းလျားကန်ဘောင် တံတားနီအရေးအခင်းတွေနဲ့ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးတေ...
ကြံ့ခိုင်ရေး အမာခံနယ်မြေတွင် ရတပ ပါတီ ဗဟိုကော်မီတီ မျက်နာ စုံညီ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည်
(နိရဉ္စရာ- ၁၇ မေလ ၂၀၁၃) ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီ၏ အမာခံ နယ်မြေ တစ်ခု ဖြစ်သော ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့တွင် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ (ရတပ) ၏ ဗဟိုကော်...
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ တက်ကနက်ပင်လယ်ကမ်းခြေတလျှောက် ရေထဲမှာ မျောပါလာတဲ့ လူသေ အလောင်း ၂၄ လောင်းကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ရဲက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကမြန်...
အဖမ်းခံမွန်လူငယ် ၁၁ ဦးအနက် ၆ ဦးအာမခံရ
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ ရိုဂိုးရွာ၌ ပြီးခဲ့သည့် သင်္ကြန်နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့တွင် တာဝန်ကျရဲများနှင့် ဒေသခံမွန်လူငယ်တို့ ရိုက်ပွဲ ဖြစ်ကြသဖြင့် အဖမ်းခံခဲ့ရ...
For My All Dear Friends !
ကျွန်တော့် http://www.lovercreater.com/ ၀က်ဆိုက်အား ဆက်လက်ရေးသားမည်မဟုတ်တော့ပါ။ ယခင်မှ ကျွန်တော်ရေးသားထားသော အကြောင်းအရာများအား http://www.chitthawkabarmya...
Burma, the dictatorship of the absurd (teaser)
Burma, the dictatorship of the absurd (teaser)Uploaded by CinquiemeEtageProduction. - News videos hot off the press.
ဒီနေရာလေးက မြန်မာပြည်တွင်းမှာ သတင်းဖတ်လိုသူတွေအတွက် အဓိကရည်ရွည်ပါတယ်။လိုရာကိုရောက်အောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ပိတ်ထားတဲ့အရပ်ကဆိုရင် ပုံတွေဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်စာတန်ြး...
အမေ့အိမ်. Awesome Inc. template. Template images by molotovcoketail. Powered by Blogger.